Amakhaya Oncedo ka-Airbnb - Indawo ekuhlala abeze ngenxa yokugula
Indawo ekuhlala abeze ngenxa yokugula
Amakhaya Oncedo · Iindawo Ekuhlala Abeze Ngenxa Yokugula
Yamkela abantu abagula kakhulu okanye abadinga ukuphumla ekunyamekeleni abantu abagulayo
Yenza ikhaya lakho lifumaneke okwexeshana simahla kubantu abadinga indawo yokuhlala.
Rentisa ngendawo yakho
UNancy noPearl abasuka e-Fisher House
Banintsi abantu abafuna ukuhambela ezonyango, kodwa amaxesha amanitsi imali yendawo yokuhlala yexeshana idla ngokuba ngowona mqobo umkhulu ekufumaneni unyango olusindisa ubomi okanye indawo yokuphumla ngoxa isigulani sisachacha. Xa izigulani zinendawo yexeshana engazukubhatalelwa ziye zithobe amaxhala ngezimali, ibe zitsho zibe nethemba kunye namadla okuyisa ukugula kwazo.
Kulapho intsapho Yamakhaya Onceda ingenelela khona. Ababuki zindwendwe banokunikezela ngendawo epholileyo neyasimahla ukuze abantu bachache.
Ikhaya lakho lisenokunika umntu uxolo lwengqondo ngoxa bechacha.
Enkosi kakhulu! Siye sahleka, sadanisa, sapheka, sahamba-hamba saza sazonwabisa. Sele kudlule ixesha elide sagqibela ukuzonwabisa.
Indlela oza kubuka iindwendwe ngayo
Amakhaya Oncedo asebenzisana nemibutho engenzi nzuzo efana no-Fisher House Foundation kunye ne-Hospitality Homes ukuze ancede izigulana zifumane iindawo ezikufutshane namaziko onyango. Ngoxa behleli apho, eyakho indima kukubanika indawo yokuhlala etofotofo ngoxa bona okanye abo babathandayo befumana unyango kwisibhedlele esikufuphi.
Izigulane ziza kuhamba neentsapho zazo okanye nabantu abazinyamekelayo . Baza kuba nanye nomntu ongumnxibelelanisi ongenzi nzuzo obanika inkxaso kulo lonke ixesha lokuhlala kwabo. Badla ngokuhlala iveki okanye iiveki ezimbini.
INDAWO YOKUHLALA YABANTU ABATHATHA IKHEFU
Amakhaya Oncedo asebenzisana nemibutho efana noMake-A-Wish ukuze afunele indawo yokuhlala abantwana abagula kakhulu kunye neentsapho zabo ezinikwe ithuba lokuba zikhe ziye eholideyini. Olu hambo lunokufaka isandla kakhulu ekuchacheni kwabo. Indima yakho kukubanika indawo efanelekileyo ukuze bakhe bathi khebevu baze bamanyane.
Baza kuba nomntu osebenzela umbutho ongenzi nzuzo ojengene nabo oza kuba nceda ngalo lonke ixeshe behleli apho. Badla ngokuhlala iintsuku eziyi-5 ukuya kweziyi-10.
Umnxibelelanisi Wamakhaya Oncedo ebenobubele. Uye walungiselela ukuba intsapho yabantu abane izokuhlala kwindawo yethu ubusuku obunye. Ebenokubele ngeyona ndlela ibe bekulula ukuncokola kunye naye. Uye wandinika zonke iinkcukacha ebendizidinga ngale ntsapho waze babaxelela nangemithetho yekhaya lethu, kunye nokunye. Nayo le ntsapho ibithandeka. Bekumnandi nje.
Umbuki zindwendwe wakwa-Airbnb
Ndizalelwe ndaze ndakhulela e-Paris, ndiyathanda ukuvula indawo yam ndize ndinikise ngendawo ekhuselekileyo nethe zava.
Uza kucelwa iinkcukacha ezisisiseko ezinjengegama lakho elipheleleyo, ifoto yeenkcukacha nedilesi yeimeyile. Unokuchaza nokuba ukhuthazwe yintoni ukuze ubuke iindwendwe.
Vula iakhawunti yendlu yakho
Sixelele ukuba iphi indawo yakho, inani labantu enokubathatha kunye nokuba ifumaneka nini. Ukuba sele ungumbuki zindwendwe, unokukhetha indlu esele ikho.
Ndisebenzela umbutho ongenzi nzuzo onikezela ngenxaso kunye nezinye izinto kubantu njengoko befuna unyango .
Iindwendwe ziza kukuthumelela umyalezo ukuba zicinga ukuba indawo yakho izifanele, okanye usenokuthintwa ngumbutho ongenzi nzuzo obhukishela abantu babo egameni labo. Ungabuza imibuzo, uvumelane namalungiselelo, uze ubeke izinto ozilindeleyo kweli xesha liza kuhlalwa ngaphambi kokuvuma nantoni na.
Lungela ukwamkela iindwendwe
Iqela lethu likho ukuze likuncede ukuba kukhona imibuzo onayo njengoko ulungiselela ukufika kweendwendwe zakho. Siza kukunika izinto eziza kukunceda kunye neempendulo kwimibuzo edla ngokubuzwa. Nawe unako ukuqhakamshelana nalo mbutho ungenzi nzuzo okanye nolu ndwendwe ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngokuza kwalo. Izigulani zidla ngokuhamba neentsapho zazo okanye abantu abazinyamekelayo, ibe ziza kube zinaye nomnxibelelanisi osebenzela umbutho ongenzi nzuzo ukuze azincede azinike inxaso njengoko zilapha.
Inkqubo ka-Airbnb Yamakhaya Oncedo incede amakhaya abuka iindwendwe ukuba ancede iindwendwe ezingakumbi - ezo ezidla ngokuphela sezikuludwe lwabalindileyo - ngokunikezela ngendawo yokuhlala ku-Airbnb eyakutsho kwiiveki ezimbini sihlandlo ngasinye, xa izinto ezisetyenziswa yintsapho - ingqondo, umzimba, imali - ziphelile.
Umlawuli Oyintloko, Amakhaya Okubuka Iindwendwe
Indlela esikuxhasa ngayo
Siyazi ukuba oku kunokubonakala ngathi ngumsebenzi omnintsi. Yiloo nto sisenza unako-nako ukuba sikunike izinto ezinokukunceda neziza kukukhusela ngaphambi kokuhlala kondwendwe lwakho naxa luhleli kwakho.
inkxaso efumaneka imini nobusuku ngefowuni kunye nezinye izinto onokuzisebenzisa
Ayinguwe wedwa. Ukongeza kwiqela elinikela inkxaso 24/7 lakwa-Airbnb, usenokuqhagamshelana neqela leengcaphephe eziphendula nayiphi na imibuzo ngokubhukisha kwijelo elithi Amakhaya Oncedo.
Ukubuyiselwa imali ngenxa yomonakalo kwisakhiwo
Nangona inqabile into yokonakaliswa kwendawo ngempazamo, siyaqonda ukuba unokufuna ukukhuselwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo siza kubhatala bonke ababuki zindwendwe ngomonakalo kwizindlu zabo imali eyakutsho ku-$1,000,000.
Iimpendulo zemibuzo yakho
Yintoni Amakhaya Oncedo?
Ngubani onokubuka iindwendwe Kumakhaya Oncedo?
Ngubani ofanelekileyo ukuba abhukishe kuMakhaya Oncedo?
Ndingayibhukisha njani indawo yokuhlala Kwikhaya Loncedo?
Ndizilungiselela njani iindwendwe kuMakhaya Oncedo?
Ndingaqhagamshelana njani nendawo exhasa Amakhaya Oncedo?
Joyina intsapho efuna ukunceda isebenzisa indlela entsha nenobuntu.
Fumana iimpendulo kwiZiko lethu Loncedo okanye uqhakamshelane nathi.
Yiya Kwindawo Yoncedo
Sichazele ukuba bekunjani